दक्षिण कोरिया Archives - Lokpati.com
Tag - दक्षिण कोरिया
विदेशी विद्यार्थीलाई पनि इ-९ भिसा दिने तयारीमा दक्षिण कोरिया
काठमाडौं । दक्षिण कोरिया सरकारले यहाँ अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीलाई पनि इ–९ भिसा उपलब्ध गराउने गरी तयारी थालेको छ । इ–९ भिसा कोरियाली भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी इपिएस प्रक्रियामार्फत कोरियामा रोजगारीका लागि आउने प्रवासी...
भाषा परीक्षा पास गरेर मात्र कोरिया जान नपाइने, के छ नयाँ शर्त ?
काठमाडौं। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र गणतन्त्र कोरिया रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयबीच सम्पन्न समझदारी पत्रअनुसार रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत गणतन्त्र कोरियामा नेपालीहरुलाई कामदारका रुपमा लैजादै आएको...
भाषा परीक्षा पास भएका आधामात्र कोरिया जाँन पाउने
काठमाडौं, २० असार । वैदेशिक रोजगारीको लागि दक्षिण कोरिया जान यसपालि भाषा परीक्षामा पास हुनेमध्ये आधामात्र जान पाउने भएका छन्।
यो वर्ष परीक्षामा पास भएका १२ हजार ९ जनामध्ये दक्षिण कोरियाले ६ हजार ७ सय मात्र कामदार लैजाने इपिएस...
इतिहासकै ठूलो डढेलो, ४ सय घर र ९ सय गोठ ध्वस्त
सियोल । दक्षिण कोरियामा इतिहासकै सबै भन्दा ठूलो डढेलो लागेको छ । दक्षिण काेरीयाकोे उत्तरपूर्वी तटीय क्षेत्रमा गतसाता फैलिएको डढेलोबाट ४ सय भन्दा बढी घर र ९ सय २० भन्दा बढी पशु गोठ डढेर क्षतिग्रस्त भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्...
राष्ट्रिय प्रकोप घोषणा
सोल,२२ चैत। दक्षिण कोरियाली सरकारले शुक्रबार राष्ट्रिय प्रकोपको घोषणा गरेको छ। देशको उत्तरपूर्वी तटीय क्षेत्रका पाँच ओटा शहरमा भीषण डढेलो लागेपछि सरकारले राष्ट्रिय प्रकोपको घोषणा गरेको हाे ।
उक्त शहरमा लागेको भीषण...
आयो विश्वमै पहिलो ‘फाइभ जी’ दुरसञ्चार सेवा !
सियोल । दक्षिण कोरियाले फाइभ जीको दुरसञ्चार सेवा ल्याएको छ । दक्षिण कोरियाले विश्वमै पहिलो पूर्ण–विकसित फाइभ जीको मोबाइल नेटवर्क विकास गरेको हो ।
तीव्र गतिको यस प्रविधिले मोबाइलबाट डाटा ट्रान्सफरमा अभूतपूर्व फड्को मार्ने...
काेरिया भाषाका लागि कतिले दिए आवेदन ?
काठमाडौं, ९ चैत । कोरियाको भाषाका परीक्षाका लागि पहिलो दिन साँझ ७ बजेसम्म ५५ हजार ९४ युवाले आवेदन दिएका छन् ।
रोजगार अनुमति प्रणाली ९ईपीएस० अन्तर्गत दक्षिण कोरियाको भाषा परीक्षामा सहभागी हुन ५५ हजार ९४ युवाले आवेदन दिएका...
होटलमा गोप्य क्यामरा राखि अश्लील गतिविधि रेकर्ड
एजेन्सी । दक्षिण कोरियाका होटलका कोठाहरुमा गोप्यरुपमा क्यामरा जडान गरेर अश्लील गतिविधि रेकर्ड गरेको पाइएको छ ।
उक्त होटलहरुमा गोप्यरुपमा क्यामरा जडान गरी १६ सय व्यक्तिको अश्लील गतिविधि रेकर्ड गरीएको छ । यस क्रियाकलापमा...
‘चीनसँग बलियो सम्बन्ध बनाउँछौं’
टोकियो, १४ माघ । जापानका प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले चीनसँग निरन्तर सुधारको क्रममा रहेको दुईदेशबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाइने बताएका छन् । साथै, उनले चीनको बढ्दो सैनिक गतिविधि र उत्तर कोरियाको आणविक निःशस्त्रीकरणको...
महासचिव विष्णु पौडेललाई कारबाही गर्ने नेकपाको निर्णय
केपी ओलीसँग मिल्ने सम्भावना सकियोः नेपाल